I-Apple isolwa ngokwephula amalungelo obunikazi beCalTech yeWi-Fi | Ngivela kwa-mac
U-Apple usolwa ngokwephula amalungelo obunikazi be-Wi-Fi yakwaCalTech
Uhlelo lwe-patent luyisikhuthazo samacala, futhi i-Apple ayizazi kulezi zimo. Icala lakamuva livela ku- California Institute of Technology o UCaltech. Amalungelo obunikazi e-Caltech okukhulunywa ngawo kuleli cala afakwa phakathi kweminyaka I-2006 ne-2012, futhi ugxile Amakhodi we-IRA / LDPC. Basebenzisa izifunda ezilula kakhulu zokufaka ikhodi nokufaka ikhodi okuhloswe ngazo ukuthuthukisa ukusebenza kanye namazinga wedatha ephelele. Lobo buchwepheshe obufanayo njengamanje busetshenziswa ngaphakathi kwamazinga I-Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi 802.11ac, asetshenziswa emikhiqizweni eminingi ye-Apple.
Icala elibhekene ne-Apple lenziwa kufayela le- Inkantolo yaseCalifornia Federal, futhi ithi imikhiqizo ye-Apple, kufaka phakathi iPhone, iPad, Mac, ngisho ne I-Apple Watch ukusetshenziswa kwama-encoders, okusho ukuthi I-Apple yephula amalungelo obunikazi amane.
I-Apple ikhiqiza futhi ithengise imikhiqizo ye-Wi-Fi efaka ama-IRA / LDPC encoders, namabhokisi wokusetha aphezulu aphula la malungelo obunikazi. Imikhiqizo ephula la malungelo obunikazi yile: iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5C, iPhone 5s, iPhone 5, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad Mini4, iPad Mini 3, I-iPad Mini 2, iMacBook Air, ngisho ne-Apple Watch.
Ngaphakathi kwesudi efanayo, ICalTech ibuye icaphune iBroadcom elikushoyo nakho ukwephula amalungelo obunikazi afanayo. Lokhu kuzoba nengqondo, kubhekwa ukuthi i-Broadcom ingomunye wabaphakeli abaphezulu be-Apple bezingcingo ze-Wi-Fi. Lawa machips afakwe ezinhlobonhlobo zemikhiqizo yeselula ethandwa kakhulu yi-Apple, kufaka phakathi i- IMacBook Pro Retina, iMacBook Air, namanye amaMacs.
I-Apple ingelinye lamakhasimende amakhulu ka-Broadcom. Ngo-2012, 2013, nango-2014, ukuthengiswa kwe-Apple kwakumele i-14,6%, 13,3%, ne-14,0% yemali engenayo ye-Broadcom Corp. ngokulandelana.
Asazi ukuthi lokhu kuzophela kanjani, nokuthi kuzocelani i-Apple yokwephula la malungelo obunikazi. Kepha esikwaziyo ukuthi ucele i ukuqulwa kwejaji.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » U-Apple usolwa ngokwephula amalungelo obunikazi be-Wi-Fi yakwaCalTech
I-Apple Pay ingeza ukuxhasa iBMO, TD neScotiabank yaseCanada
Izimemo ze-WWDC 2016 zihanjisiwe